YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, November 17
နအဖလက်ထက်ချဉ်းကပ်မှုဖြင့်ပါမစ်များ၊လုပ်ပိုင်ခွင့်များရရှိသူများအားပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အချိုးအစားအလိုက်ပေး ဆောင်လျှင်လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့်ပြုမည်ဆိုသောကြောင့်ဦးတေဇတို့မက်ဇော်ဇော်တို့လည်းအသက်ရှုချောင်ရလေ တော့သည်။
လည်းနောင်၁၀နှစ်တိုင်လာသော်လည်းပြဿနာတစုံတရာပေါ်ပေါက်ခြင်းအလျဉ်းမရှိ၍လက်နက်များမှာသံချေးတက်ဆွေးမြေ့ကုန်လေတော့သည်။ကရင်အ မျိုးသားချင်းသွေးစည်းညီညွတ်ရေးကိုဆောင်ညှဉ်းမည်ဟုမြိုင်ကြီးငူဆရာတော်၏မိန့် ကြားချက်ကိုကရင့်လူငယ်များတိုးတက်ရေးပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှုးဇိုရာဖန်းမှကြိုဆိုကြောင်းကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
(အိပ်မက်ဟူသည် မိမိကိုယ်ကိုညာမရသော လိုချင်တောင့်တဖြစ်တည်မှုဖြစ်သည်)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/17/20100အကြံပြုခြင်း
17 Nov 2010 ဒိုင်ယာရီ
17 Nov 2010 Yeyintnge's Diary
လူဆိုး သူခိုး ကြီးစိုးတော့မယ့် ဒို့နိုင်ငံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် AIDS ဝေဒနာရှင်များအား တွေ့ဆုံအားပေး
ရန်ကုန် နိုဝင်ဘာ ၁၇။
တောင်ဒဂုံ မြို့နယ်ရှိ HIV နှင့် Aids လူနာများကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာတစ်ခုသို့ သွားရောက် အားပေးခဲ့ပြီးနောက် စုစည်းလာသော ရာနှင့်ချီသော ပြည်သူလူထုများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ပြောခဲ့ရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူသားတိုင်းတွင် လူသားဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများရှိသဖြင့် မည်သူမဆို လူသားဆိုင်ရာ အခွင့်ရေးများရရှိရမည်ကို UNံ Human rights center က တာဝန်ခံထားပြီး ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သလို၊ သူမအနေနှင့်လည်း ထိုဝေဒနာသည်များ၏ ဘဝနေထိုင်မှု မြင့်မား လာစေရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု လာရောက်နားထောင်သော ပြည်သူလူထုများရှေ့တွင် ဂတိပြု ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် AIDS လူနာများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာသို့ ယနေ့ နေ့လည် ၂နာရီက ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဝေဒနာသည်များကို အနီရောင် နှင်းဆီပန်းများ လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး တစ်ဦးချင်းစီကို ရင်းနှီးစွာ နှုတ်ဆက် အားပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် လူနာများကို သူမတို့ပါတီအနေဖြင့် တတ်စွမ်းသမျှ ကူညီ သွားမည်ဟု ဂတိပြုပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ထူးဆန်းသည်မှာ နအဖ၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စောင့်ကြည့်သတင်းယူရန် တာဝန်ရှ်ိသူများမှာ ယခုတစ်ကြိမ်တွင်မူ အနီးအနားသို့ ကပ်လာခြင်း မရှိပဲ အဝေးမှပင် စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြသည်ဟု သိရပါသည်။
ပြည်တွင်းတင်းထောက် (ရွှေဝါရောင် သတင်းလွှာ)
Posted by saffrontoward
The Voice Weekly 6-50 and Its apology to the readers...
The Voice Weekly သည် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးစနစ် ပြောင်းလဲ သွားပြီး ဥပဒေပြုအာဏာ အတွင်းသို့ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းမှု ပြုလုပ်မည့် နိုင်ငံရေး အင်အားစုများ ရောက်ရှိသွားမည်ဟု ယုံကြည်သည့် အလျောက် ထိုသို့ ရှဉ့်လည်း လျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာ အခြေအနေသစ်ကို မြင်တွေ့ ရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အစဉ်တစိုက် မျှော်လင့်ချက်ပေး ရေးသားခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ တဖြည်းဖြည်းပုံပေါ်လာနေသော အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ကြည့်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုတင် ခန့်မှန်းရေးသားချက်များ မမှန်ကန်ကြောင်း ထင်ရှားလာနေသည်ကို တွေ့ရသော ကြောင့် The Voice Weekly အနေဖြင့် စာဖတ်သူများကို မဖြစ်နိုင်သော မျှော်လင့်ချက်များ ပေးခဲ့သူအဖြစ် တောင်းပန်ရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ခံစားရပါသည်။
The Voice Weekly အနေဖြင့် ခန့်မှန်း ရေးသားခဲ့မှုများ မှားယွင်း သွားသည့်တိုင် မိမိတို့ အနေဖြင့် နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအပေါ် ထားရှိသော စေတနာ ရာနှုန်းပြည့် မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းကိုမူ ထပ်မံ၍ ပြောကြားလိုပါသည်။
The Voice Weekly တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော သုံးသပ်ချက်အားလုံးသည် ရာနှုန်းပြည့် ရိုးသား ဖြောင့်မတ်မှု ရှိပြီး နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအပေါ် ထားရှိသော စေတနာ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်း မှတ်ကျောက်တင်ခံနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် မည်သည့် Stakeholder တစ်ဖက်ဖက်ကိုမျှ နိမ့်ပါးစေလိုသော ဆန္ဒမရှိဘဲ နှစ်ဖက် Win –Win အလို့ငှာသာ ရည်ရွယ်ခဲ့ကြောင်း ကိုလည်း မှတ်ကျောက်တင်ခံနိုင်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ The Voice Weekly ၏ ခန့်မှန်းသုံးသပ်ချက်များ မှားယွင်းခဲ့ကြောင်းကိုမူ စာဖတ်သူများသို့ ရိုးသားစွာ ၀န်ခံလိုပါသည်။ မိမိတို့ ၏ စေတနာအမှားသာလျှင်ဖြစ်၍ စာဖတ်သူများအား မျှော်လင့်ချက်အမှား ပေးရာ ရောက်ခဲ့လျှင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အနူးအညွတ် တောင်းပန်မှုကို လက်ခံ၍ စာဖတ်သူများက ခွင့်လွှတ် ပေးကြမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
The Voice Weekly အနေဖြင့်မူ မိမိတို့ သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ်ထားသည့်အတိုင်း နိုင်ငံနှင့် လူမျိုး အတွက် မလျှော့သော ဇွဲလုံ့လဖြင့် ဆက်လက် တာဝန် ထမ်းဆောင်ပါမည့် အကြောင်း စာဖတ်သူများသို့ တစ်ပါတည်း အသိပေး လိုက်ပါသည်။
The Voice 6-50
Background Paper on Daw Aung San Suu Kyi
ဘယ်လမ်းလိုက်ကြမလဲနှင့် လက်တွေ့နိုင်ငံရေး (၁၇)
၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံ၊ Non-violent Revolution၊ တတိယအင်အားစုနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့်အတူ နေအရုဏ်မှာ ကြာပဒုံပွင့်လိုက်သလို မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ အားသစ် မာန်သစ်တွေ၊ ညီညွတ်ရေးအသံတွေက ဘဝဂ်ကြားအောင် မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြီး ညံထွက်လာပါတယ်။ မျော့မျော့လေးသာ ရှိနေတော့တယ်လို့ ထင်ရတဲ့ နိုင်ငံရေးလူမမာသည် “တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရေး”ကတောင် ရုတ်တရက် ငုတ်တုတ်ကြီး ထထိုင်လာသလိုပါဘဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အတူသစ်ဆန်းလာတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းစဉ်တွေ အများအပြားထဲက အချို့ကို ကောက်နှုတ် ဆွေးနွေးကြည့်လိုပါတယ်။
၂၁ရာစုနှင့် ပင်လုံညီလာခံ စကားလုံးနှစ်လုံးကို ပေါင်းစပ်မှုဟာ အခုလို အချိန်အခါမျိုးမှာ အတော်လေးထူးခြား လေးနက်လှပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အင်မတန်အရေးပါတဲ့ အချိန်ကိုက် မှုဝါဒရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှု(Brainchild)လို့ မြင်မိတယ်။ ၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံမှာ ပထမဆုံး အနေနှင့် နိုဝင်္ဘာ၁၅၊ ၂၀၁၀ အာအက်ဖ်အေ ဆရာဦးဝင်းတင်နှင့် ဦးဘိုလှတင့် ဆွေးနွေးခဏ်းမှာ ဆရာဦးဝင်းတင်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြောကြားချက်အဖြစ် အကြိမ်ကြိမ် ရည်ညွန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုအကြောင်းပြောတိုင်း ပင်လုံ စိတ်ဓါတ်၊ ပင်လုံ အတွေးအခေါ်၊ ပင်လုံ ပဋိညာဉ်ဆိုတာတွေကို ကျုပ်တို့တွေ အခိုင်အမာ ဆိုကြပါတယ်။ ဒီပင်လုံ စိတ်ဓါတ်၊ ပင်လုံ အတွေးအခေါ်၊ ပင်လုံ ပဋိညာဉ်တွေ ပြန်လည် ဆန်းသစ်မဲ့ ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံကို ၂၁ရာစု အတွေးအခေါ်တွေနှင့်အညီ ကျင်းပဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ ကျုပ်တို့အားလုံးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စိမ်ခေါ်(Challenge)လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၀ခု အိုင်တီခေတ်(Internet Technology) ဖြစ်နေလို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ လက်ထက်ကလို သံကြိုးစာ(Telegram)တွေအစား ခေတ်ပေါ် emails, Tax massages, Teleconferencesတွေ သုံးနိုင်တာကြောင့် ၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ခြင်းဆိုရင်တော့ နိုင်ငံရေးအနှစ်သာရပျောက်ပြီး သိပ်ဟန်ကျမယ် မထင်ပါဘူး။ တကယ်တော့ ၁၉၄၇ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်လက်အောက်က လွတ်မြောက်ကာစ မြန်မာ့အခြေအနေ၊ ကမ္ဘာ့အခြေအနေတွေနှင့် ယနေ့၂၁ရာစု မြန်မာ့အခြေအနေ၊ ကမ္ဘာ့အခြေအနေတွေ မတူတော့ဘူးဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုထားဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ထင်ရှားအောင် ဥပမာပေးရရင် ၁၉၄၈ ပါလက်စတိုင်းဒေသမှာ အစ္စရေးနိုင်ငံ စတင်တည်ထောင်စဉ်က ကာလမျိုး၊ ၁၉၄၈ အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးရစဉ် ကက်ရ်ှမီးယားဒေသ အခြေအနေမျိုးကို အခုကာလမှာ အတိအကျ ပြန်သွားလို့ မရနိုင်သလိုပါဘဲ။ သို့သော် ၁၉၄၇ကာလဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၂၁ရာစုဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်အခြေအနေမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်၊ အမျိုးသားရေး ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်၊ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ခွင့်စတဲ့ မွေးရာပါ မူလဘူတ အခွင့်အရေးတွေကတော့ ဈေးဆစ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုတော့ လက္ခံကြဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဘဲ ယနေ့၂၁ရာစု မှတ်ကျောက်တွေဖြစ်တဲ့ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးတွေ၊ အခြေခံ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးတွေကိုလည်း မူးတင်း ပဲတင်းလုပ်လို့ မရပါဘူး။
ထင်ရှားတဲ့ ပြည်ပတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်လောက်က အိန္ဒိယရောက်စဉ်မှာ “Inacountry as diverse as Myanmar, Democracy can only beaTransition”ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာမျိုးကိုတော့ သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီကို ကြားကာလအတွက်ဘဲ သုံးမယ်ဆိုရင် အမြဲတမ်းကျင့်သုံးမှာက စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို မြေရှင်ပဒေသရာဇ်စနစ်က အစားထိုးနေရာယူမဲ့ စော်ဘွား၊ စော်ခံ၊ တောင်ပိုင်၊ တောင်အုပ်စနစ်လားလို့ မေးရမလို ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လိုင်းကားတွေ ပြတ်တုန်း အရေးပေါ် ဖြတ်ခုတ်တတ်တဲ့ ကြားကားမဟုတ်ပါဘူး။ ၂၁ရာစု လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီး ငြိမ်းချမ်း စည်ပင် တိုးတက်ဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အမြဲတမ်း ပင်မယာဉ်ကြီး(Permanent Principal vehicle) ဖြစ်ပါတယ်။
တကဲ့စိန်ခေါ်မှုက တိုင်းရင်းသားတိုင်းရဲ့ မူလဘူတ ရပိုင်ခွင့်တွေကို ၂၁ရာစုနှစ် လူမှုဘဝ အခြေအနေတွေနှင့် ကိုက်ညီအောင် ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် အကောင်အထည်ဖေါ် ကျင့်သုံးမလဲဆိုတာကို မြန်မာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်အားလုံးက သမိုင်းဝင် ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံကြီးမှာ အပြန်အလှန် လေးစားမှု၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ ချစ်ကြည်မှုတွေ အခြေခံပြီး အကြေအလည် စုပေါင်းညှိနှိုင်း အဖြေရှာနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Non-violent Revolution (ငြိမ်းချမ်းသော တော်လှန်ရေး)
နိုဝင်္ဘာ၁၅၊ ၂၀၁၀ခု John Simpson(BBC) မေးမြန်းခဏ်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က
"I think we also have to try to make this thing happen... Velvet revolution soundsalittle strange in the context of the military, butanon-violent revolution. Let's put it that way," she said.
Non-violent(အကြမ်းမဖက်သော/ငြိမ်းချမ်းသော)နှင့် Revolution(တော်လှန်ရေး)ဆိုတဲ့ ယေဘုယျအားဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောဆောင်(Oxymoron)တယ်လို့ ယူဆနိုင်တဲ့ ဝေါဟာရနှစ်ခုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရဲရဲဝန့်ဝန့် စတင်ပေါင်းစပ် အသုံးပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးဆိုတာ အခြေခံအဆောက်အဦးကအစ အရှိန်အဟုန်နှင့် ပြောင်းလဲပစ်ခြင်း (Radical/Noticable/Great Change for Better)လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပြီး အဲဒီတော်လှန်ရေးကို ငြိမ်းချမ်းသောနည်း(Non-violent Way)အားဖြင့် မဖြစ်မနေ ပြောင်းလဲပစ်စေမယ်လို့ အခိုင်အမာဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြွေးကြော်သံ(Motto)က ငြိမ်းချမ်းသော တော်လှန်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းစာဆရာကြီး လူထုဦးစိန်ဝင်းက ခံစစ်ဆန်လွန်းပြီး လှုပ်ယှားမှုကင်းမဲ့သော အကြမ်းမဖက်နည်း(Passive Non-violence) မဟုတ်ဘဲ ထက်မြက်တက်ကြွပြီး ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်သော အကြမ်းမဖက်နည်း (Active Non-violence) ဖြစ်သင့်တယ်လို့ RFAရဲ့ နိုဝင်္ဘာ၁၅၊ ၂၀၁၀ ညပိုင်းအစီအစဉ်မှာ ပြောကြားသွားပါသေးတယ်။
တတိယအုပ်စုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းချက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တတိယဖြစ်ဖြစ်၊ စတုတ္ထဖြစ်ဖြစ်၊ ပဉ္စမဖြစ်ဖြစ် အင်အားစုအားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုကြောင်း ပြောကြားသွားပါတယ်။ ဘုံအကျိုးအတွက် ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတယ် ဆိုကတည်းက အင်အားစုတွေက တပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်သွားပြီး အင်အားစု တစ်ခုတည်း ဖြစ်သွားတာကို တတိယအင်အားစုဆိုသူတွေ သတိမူဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ အခြေခံစံတွေ အာမခံချက်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေက နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ အယူဝါဒတွေကြားမှာ တတိယအင်အားစုတို့၊ Tea Partyတို့၊ (Ralph) Nader Factor တို့ဆိုတာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးနှင့် သဘာဝအားဖြင့် ပတ်သက်မှု မရှိတတ်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အင်ဂျီအို(NGO)တွေက လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ဆောင်ခွင့် မရှိတဲ့၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားခွင့် မရှိလို့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရအောင် မီဒီယာတွေကိုယ်တိုင်က မိမိအခွင့်အရေးတွေကို မိမိကိုယ်တိုင် တိုက်ယူနေရတဲ့ ကျုပ်တို့နိုင်ငံမျိုးမှာ ပါတီနိုင်ငံရေး အင်ပြည့်အားပြည့် မရှင်သန်နိုင်သေးတာမို့ တတိယအင်အားစုဆိုတာ မရှိနိုင် မရှိကောင်းပါ။ အင်ဂျီအိုတွေ၊ မီဒီယာတွေ၊ တတိယအင်အားစုတွေဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုလူမျိုး၊ အဖွဲ့အစည်းမျိုးဖြစ်ဖြစ် အားလုံးက ဖိနှိပ်သူ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို မိမိနည်း မိမိဟန်နှင့် ဆန့်ကျင်နေကြရတာ ဖြစ်သောကြောင့် ကြားနေမယ်ဆိုခြင်းသည်ပင် ပြသနာတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် မရှုမြင်နိုင်မှု(Illusion)သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်အားစုအားလုံး အလွှာအားလုံး အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပါဝင်ပတ်သက်နေဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိနေပါတယ်။ ပထမပိုင်းက ညီညွတ်အားကောင်းသော အမျိုးသားနိုင်ငံရေး နိုးကြားလှုပ်ယှားမှုကြီး ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး လှုပ်ယှားမှုကြီးကို အောင်မြင်စွာ ပွဲသိမ်း အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ရေးပိုင်းမှာကျတော့ တပ်မတော်က မပါမဖြစ် ပါဝင်လာရေးက အခြေခံ လိုအပ်ချက်ကြီး ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ တပ်မတော်ပါဝင်လာရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က BBCနှင့် တွေ့ဆုံခဏ်းမှာဘဲ
"I don't want to see the military falling. I want to see the military rising to dignified heights of professionalism and true patriotism," she said. တပ်မတော်ကို ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားစေ၊ တပ်မတော်သားကောင်း ပီသစေ၊ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ် ထားရှိပုံ မှန်ကန်စေလိုမှုတွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို မရရအောင် ပြည်သူလူထု အကူအညီနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စွမ်းဆောင်ရယူနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း ဆွေးနွေးတော့မယ်ဆိုမှ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲက ရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ခေါ်မကြား၊ အော်မကြားနဲ့၊ ဘယ်ကြမ်းပေါက်က ပြုတ်ကျသွားသလဲ မသိ။ နေမင်းကြီး ပေါ်ထွက်လာလို့ မြူညစ် မြူခိုးတွေ လွင့်စင် ပျောက်ကွယ်သွားကုန်သလိုများ ဖြစ်နေရော့သလား။
တဒေါင့်ဒေါင့်မှာတော့ ပြန်တွေ့မှာပါလေ။ ရှာတွေ့မှဘဲ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း ဆက်ပြောကြတာပေါ့။
နိုဝင်္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၀
အောင်ဆန်းစုကြည် by yeyintnge
A D A A D Aဒီနေ့ ဒီရက် ဒီအခါ ဒီရာသီလေးမှာ .. လူသားလေး တဦးက ဒီမြေ ဒီရေ မှာမွေးဖွား ..
ကြိုစိုသည် ကမ်းလင့်သည် လောကကြီးကဆိုခဲ့သည်..
လူသားလေးရဲ့ဘ၀ ရှင်သန်တာ ပြည်သူတွေအတွက်ပါ .. သူပေးစပ်ခဲ့သမျှ ရာဇ၀င်တွေ
D A G A G A G A
အာဇာနည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသား၏ အမိသည် အောင်ဆန်းစုကြည် .. အောင်ဆန်းစုကြည်
အိုမေမေ ရေ ပြည်သူတွေရင်မှာလေထင်ကျန်နေ မြင်ယောင်နေ အမေ့ရဲ့အပြုံး အမေ့ပုံရိပ်
A G A G A
စွဲကျန်နေ အောင်ဆန်းစုကြည် .. အောင်ဆန်းစုကြည်
ရန်ကုန် စီးတီးစတားဟော်တယ်တွင် ဗုံးလို့ သံသယဖြစ်ဖွယ်ပစ္စည်း တွေ့ရှိ
Su free unite & advance to grab the hope
18/11/2010 first eleven journal. Please read carefully all the scarlet Red letter.
PFOB chair statement on Burma elections and Aung San Suu Kyi
Canada Parliamentary friend of Burma(PFOB) Chair Decries Absurd Election Complaint Fees and Calls on the Military and its Proxy Party to Protect Aung San Suu Kyi
It is absurdly difficult to makeacomplaint about the recent sham elections in Burma orchestrated by the military and their party USDP. To makeasingle complaint costs about5times your annual income. And if the complaint is determined to be unfounded, you can be fined about 15 times your annual salary. “This is absurd” said PFOB Chair the Honourable Larry Bagnell M.P. Yukon.
“This is simply an extension of the illegitimacy of the entire process, where certain parties were not allowed to present candidates, certain regions of the country were not allowed to vote, and the costs to register asacandidate for the election were prohibitive”.
I also wish to remind the military regime and their party, USDP, that they are responsible for Aung San Suu Kyi’s safety now that she has been released from House Arrest. The regime tried twice to assassinate her (andahundred of her NLD party members were killed in the latest attempt). “Any future attempts will likely be more sophisticated,” suggested PFOB Chair Hon. Larry Bagnell M.P.
For Information: Hon. Larry Bagnell M.P. 613 995 9368
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် AIDS ဝေဒနာရှင်များအား တွေ့ဆုံအာ...
The Voice Weekly 6-50 and Its apology to the reade...
ရန်ကုန် စီးတီးစတားဟော်တယ်တွင် ဗုံးလို့ သံသယဖြစ်ဖွယ...
PFOB chair statement on Burma elections and Aung S...